Dibad Bax ka Dhan ah Dowladda Somaliya oo Maanta ka Dhacay Burtinle – Radio Daljir
Dibad Bax ka Dhan ah Dowladda Somaliya oo Maanta ka Dhacay Burtinle
Juunyo 29, 2015 7:00 b 0
Isniin, Juun 29, 2015 (Daljir)_Dad weynaha ku dhaqan Degmada Buurtinle ee Gobalka nugaal ayaa maanta isugu soo baxay mudaharaaad ballaaran oo loogasoo horjeedo diban daabyada xukuumada federaalk ku hayso dhulka Puntland iyo maamul lagu dhisayo magaalada Cadaado.
Qayb-baha kala duwan ee shacabka ayaa so cod ku mara bartamaha magaalada waxaana ay ka dhawaaqayeen erayo ay ku muujinayaan sida ay uga xunyihiin faragalinta ay puntland ku hayaan Gudoomiyaha Baarlamaanka soomaaliya Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari iyo madaxweynaha dowlada federalka soomaaliya xasan shiikh maxamuud iyagoona watay boorar ay ku muujinayaan dareenkooda.
Gudoomiyaha degmada Burtinle Liibaan Xirsi Khaliif oo shacabkii isku soo baxay la hadlay ayaa sheegay inay shacabka reer Burtinle aad ugasoo horjeedaan faro galinta qaawan ee xukuumada Dowladda Federalku ku hayso Puntland.
Gudoomiyaha ayaa sheegay arintaasi inaanan loo dulqaadan Karin islamarkaana ay shacabka reer Puntland kasoo horjeedaan tilaabo kasta oo lagu waxyeeleenayo midnimadooda iyo jiritaankooda.
Wuxuu ugu damabyn gudoomiyuhu ugu baaqay xukuumada federalka inay joojiso faro galinta ay ku hayso Puntland islamarkaana ka waantowdo colaada ay ka hurinayo gobolada dhexe ee Soomaaliya.
TARTAN IYO TACLIIN: Barnaamijka oo Meel xasaasi ah Maraya iyo Kulamo Adag oo Caawa Dhacaya